မနျစီးတီး ဝနျထမျးတှကေို နာရီနဲ့ ကားလကျဆောငျ မဲဖောကျပေးခဲ့တဲ့ အဂူရို – the One Sports Journal
မနျစီးတီးတိုကျစဈမှူးအဂူရိုကတော့ ဘာစီလိုနာအသငျးဆီကို ၂ နှဈစာခြုပျနဲ့ အပွီးသတျပွောငျးရှသှေ့ားခဲ့ပွီး ယူရိုသနျး ၁ဝဝတနျ လြျောကွေးစာခြုပျကို ခြုပျဆိုခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။
အဂူရို ဟာ မနျစီးတီး ကို ၂၀၁၁ ခုနှဈ တုနျးက အကျသလကျတီကို မကျဒရဈ ကနေ ပေါငျ ၃၅ သနျး နဲ့ ပွောငျးရှေ့ လာခဲ့တာ ဖွဈပွီး ကလပျ အတှကျ ပှဲပေါငျး ၃၉၀ ကစား ပေးရာမှာ ဂိုးပေါငျး ၂၆၀ သှငျးယူပွီး အသငျးရဲ့ ဂိုးသှငျး အမြားဆုံး ကစားသမား အဖွဈ မှတျတမျးရေးထိုးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အသကျ ၃၂ နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ အာဂငျြတီးနားတိုကျစဈမှူးဟာ လကျရှေးစငျအသငျးဖျောမကျဆီနဲ့ ဘာစီလိုနာမှာ ပွနျလညျတှဲဖကျကစားရတော့မှာဖွဈပွီး ရျောနယျကိုးမနျးအတှကျ အားထားရမယျ့တိုကျစဈမှူးတဈဦးဖွဈလာဖို့လညျး သခြောသလောကျရှိနပေါတယျ။
အဂူရိုဟာ မနျစီးတီး ကနေ မထှကျခှာ ခငျမှာ အသငျးက ဝနျထမျးတှေ ကို အတတျ နိုငျဆုံး နှုတျဆကျ လကျဆောငျတှေ ပေးအပျ သှားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ အဂူရိုဟာ မနျစီးတီးအသငျးကွီးအတှကျ တာဝနျ ထမျးဆောငျပေးတဲ့ ဝနျထမျးတိုငျးကို နာရီ တဈလုံးစီ လကျဆောငျ ပေးခဲ့ပွီး “Gracias! Kun Aguero” ဆိုတဲ့ စာသားကို နာရီမှာ ရိုကျနှိပျထားခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီနာရီတှဟော တဈလုံးကို ပေါငျတဈထောငျကသြငျ့တဲ့ Hublot ဒါမှမဟုတျ Tag Heuer ထုတျနာရီတှဖွေဈတယျလို့ သိရပွီး သူလကျရှိစီးနတေဲ့ ပေါငျသုံးသောငျးတနျ Range Rover Evoque ကားကိုလညျး မဲဖောကျပေးခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။
အဆိုပါကားကိုတော့ ကစားသမားတှဝေတျဆငျဖို့ဂြာစီကို ထိနျးသိမျးပေးရတဲ့ အမြိုးသားတဈဦးက ရရှိခဲ့တယျလို့သိရပွီး အဂူရိုဟာ စုစုပေါငျး ပေါငျ ကိုးသောငျးဖိုးခနျ့ကို လကျဆောငျအဖွဈပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အဂူရို ဟာ ယခငျ ကတညျးက မနျစီးတီး အသငျး ဝနျထမျးတှကေို ပွနျလညျ ကွညျ့ရှုသူ တဈဦး ဖွဈ ပွီး၊ လူခဈြ လူခငျ မြားကာ ဝနျထမျးတှကေို တဈနှဈ ၂ ကွိမျခနျ့ လကျဆောငျတှေ ပေးလေ့ ရှိတယျလို့ ကွားသိရ ပါတယျ။
မန်စီးတီး ဝန်ထမ်းတွေကို နာရီနဲ့ ကားလက်ဆောင် မဲဖောက်ပေးခဲ့တဲ့ အဂူရို
မန်စီးတီးတိုက်စစ်မှူးအဂူရိုကတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းဆီကို ၂ နှစ်စာချုပ်နဲ့ အပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီး ယူရိုသန်း ၁ဝဝတန် လျော်ကြေးစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဂူရို ဟာ မန်စီးတီး ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် တုန်းက အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ကနေ ပေါင် ၃၅ သန်း နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကလပ် အတွက် ပွဲပေါင်း ၃၉၀ ကစား ပေးရာမှာ ဂိုးပေါင်း ၂၆၀ သွင်းယူပြီး အသင်းရဲ့ ဂိုးသွင်း အများဆုံး ကစားသမား အဖြစ် မှတ်တမ်းရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှူးဟာ လက်ရွေးစင်အသင်းဖော်မက်ဆီနဲ့ ဘာစီလိုနာမှာ ပြန်လည်တွဲဖက်ကစားရတော့မှာဖြစ်ပြီး ရော်နယ်ကိုးမန်းအတွက် အားထားရမယ့်တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့လည်း သေချာသလောက်ရှိနေပါတယ်။
အဂူရိုဟာ မန်စီးတီး ကနေ မထွက်ခွာ ခင်မှာ အသင်းက ဝန်ထမ်းတွေ ကို အတတ် နိုင်ဆုံး နှုတ်ဆက် လက်ဆောင်တွေ ပေးအပ် သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဂူရိုဟာ မန်စီးတီးအသင်းကြီးအတွက် တာဝန် ထမ်းဆောင်ပေးတဲ့ ဝန်ထမ်းတိုင်းကို နာရီ တစ်လုံးစီ လက်ဆောင် ပေးခဲ့ပြီး “Gracias! Kun Aguero” ဆိုတဲ့ စာသားကို နာရီမှာ ရိုက်နှိပ်ထားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနာရီတွေဟာ တစ်လုံးကို ပေါင်တစ်ထောင်ကျသင့်တဲ့ Hublot ဒါမှမဟုတ် Tag Heuer ထုတ်နာရီတွေဖြစ်တယ်လို့ သိရပြီး သူလက်ရှိစီးနေတဲ့ ပေါင်သုံးသောင်းတန် Range Rover Evoque ကားကိုလည်း မဲဖောက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါကားကိုတော့ ကစားသမားတွေဝတ်ဆင်ဖို့ဂျာစီကို ထိန်းသိမ်းပေးရတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးက ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီး အဂူရိုဟာ စုစုပေါင်း ပေါင် ကိုးသောင်းဖိုးခန့်ကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဂူရို ဟာ ယခင် ကတည်းက မန်စီးတီး အသင်း ဝန်ထမ်းတွေကို ပြန်လည် ကြည့်ရှုသူ တစ်ဦး ဖြစ် ပြီး၊ လူချစ် လူခင် များကာ ဝန်ထမ်းတွေကို တစ်နှစ် ၂ ကြိမ်ခန့် လက်ဆောင်တွေ ပေးလေ့ ရှိတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ်။